China T-Shirt 100% Cotton Short Men T-Shirt PY-ND004 fanamboarana sy orinasa | Pinyang
Retro Square Collar Sleeve Short Woen T-Shirt PY-DT004
Fanontana ny fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny vehivavy fohy T-Shirt PY-D ...
Logo manokana ho an'ny vehivavy lava lava Hoodie PY-WW003
T-shirt boribory tsy misy fangarony
Mombamomba ny vokatra: Fahalalana lamba T-shirt, firy no fantatrao?
1. Inona ny lanjan'ny gram?
Ny lanjan'ny gram matetika dia ampiasaina hanondroana ny hatevin'ny lamba. Arakaraky ny haben'ny lanjan'izany, ny hatevin'ny akanjo. Ny lanjan'ny T-shirt dia eo anelanelan'ny 160g sy 220g. Raha manify loatra izy dia tena hangarahara. Raha matevina loatra izy dia ho sultry. Amin'ny ankapobeny, tsara kokoa ny misafidy eo anelanelan'ny 180-260g. (ny tanany fohy dia mazàna 180-220g, izay ny hateviny ihany no anaovana azy. T-shirt lava lava no mifidy lamba 260g amin'ny ankapobeny, izay an'ny karazana matevina)
2. Inona ny laharan'ny sampana?
Famaritana: ny tokotanin'ny halavan'ny kofehy vita amin'ny landy miaraka amin'ny lanjan'ny iray kilao.
Kofera isa marokoroko: kofehy landihazo madio misy isa 18 na latsaka, ampiasaina indrindra amin'ny fanenomana lamba matevina sy mavesatra na fampiakarana sy fanodinana lamba landihazo.
Kofehy manisa antonony: kofehy landihazo 19-29. Ampiasaina indrindra amin'ny akanjo ba nataony miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny ankapobeny.
Kofehy isa tsara: kofehy landihazo 30-60. Ampiasaina indrindra amin'ny akanjo ba baoritra avo lenta. Arakaraka ny maha ambony ny fanisana no malefaka kokoa. Ny T-shirt dia matetika 21 sy 32.
3. Inona no atao hoe combing?
T-shirt landihazo kofehy dia azo zaraina ho kofehy voasokitra sy kofehy namboarina.
Kofehy namboarina: enti-milaza ny kofehy nopetahan'ny fizotran'ny fihodinana, fantatra koa amin'ny kofehy tsy voadio.
Kofehy voaroy: enti-milaza ny kofehy vokarina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fizotran'ny kofehy mahazatra rehefa mihodina amin'ny kofehy landihazo avo lenta ho toy ny akora. Ny haavon'ny lamba dia madio sy malefaka ihany.
4. Inona ny fizotry ny fanontana T-shirt?
Ny fanontana T-shirt dia mizara ho fanontana amin'ny efijery ary hanonta pirinty.
Fanontam-pirinty: somary sarotra ny teknolojia, ao anatin'izany ny famolavolana, ny sarimihetsika, ny fanontana, ny fanamainana dingana maromaro. Ny tombony azo amin'ny fanontana amin'ny efijery dia ny fahamafisan'ny loko, ny faharetany ary ny fanasana lamba. Noho ny vidin'ny takelaka avo lenta amin'ny fanontana efijery dia ilaina ny famokarana betsaka mba hampihenana ny vidiny, izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fanontana tokana na kely.
Fanontana fanontana: fantatra ihany koa amin'ny hoe nohitsakitsahana mafana. Ny tombony dia ny loko mamirapiratra sy ny teknolojia tsotra. Ny fatiantoka dia ny faharetan'ny lamina tsy mahomby, tsy mahatohitra fitafiana sy fanasana.
5. Ahoana no fihira ny T-shirt?
Ny mampiavaka ny fitsaboana singeing dia ny fanesorana ny taova noforonina teo ambonin'ny volo noho ny fibre tsy miolakolaka sy ny fibres protruding, mba ho malama sy kanto kokoa ny lamba, ary ny lokon'ny lamba dia mitovy ary afaka manonta modely mazava sy tsara.
6. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny lamba landihazo T-shirt? Fa maninona no ampiana spandex?
Ny lamba landihazo madio dia miavaka amin'ny fikajiana tsara, fiarovana azo antoka ary tontolo iainana, saingy mora ketrona. Ny fanampiana spandex kely dia afaka manatsara ny toetra ara-batana amin'ny lamba, mampitombo be ny elastika amin'ny lamba, ary mitazona ny firafitra sy ny fiononan'ny landihazo madio. Ho fanampin'izany, ny fampidirana spandex amin'ny tendany dia mety hisoroka ny vozony tsy ho simba sy hihasimba, ary hitazona ny elastika maharitra amin'ny vozony.
T-shirt boribory boribory lava vozona, landihazo mahafinaritra, malefaka, madio sy voajanahary, tsy misy zavatra manimba, azo antoka sy milamina. Famolavolana tendany tranainy mahazatra, mahafinaritra sy malefaka, mavitrika kokoa. Cuffs lamaody tsotra, asa kanto, hetsika maimaim-poana. Ny haitao misy ny fiara, ny hakitroky dia mihatsara, mahazo aina tsara. Fomba fanontam-pirinty isan-karazany, akanjo asa natao ho an'ny namboarina manokana, akanjo fety, akanjo an-dakilasy, akanjo fanaovan-tsakafo, akanjo ekipa, akanjo ho an'ny ray aman-dreny sns.
Fampiasana vokatra: ho an'ny dokam-barotra, Hoodie, fitafiana vondrona, fanaingoana manokana, sns., Afaka manamboatra loko, lamina, sary famantarana.
Teknika: Fomba fanontana vita pirinty: Fanontana nomerika
Toerana niaviany: Jiangxi, Sina Anarana anarana: PIN YANG YU
Laharana maodely: PY-WW003 endri-javatra: Anti-ketrona, Miaina, Plus Size, maharitra
Vakana: Lamba lamba amin'ny tendany: lanja 180
Quantity misy: 4480 fitaovana: landihazo 100%
Akanjo tanany: Volavola fohy fohy: Blank, Fandraisana an-tanana
Karazana lamina: Fomba pirinty: Smart mahazatra
Karazan-damba: 7 andro ratsy indroa ohatra ny filaharana: Support
Haben'ny habe: habe namboarina namboarina: ekeo amboarina namboarina
Sleeve: Fonosana fohy fohy: 1pc / Opp Bag
Anaram-pamokarana: shirt olona tsy vanim-potoana: Akanjo fahavaratra
Lamba: 100% landihazo
A1: mpanamboatra ao amin'ny faritanin'i JiangXi izahay, ary manana orinasa 500㎡ any Guangzhou, Sina.
F2: Tsy manana ny volony tshirts isika izao, afaka manao ny tshirts ve isika?
A2: Eny tokoa, pls lazao anay ny hevitrao momba ny tshirts, hanampy anao hamita ny endriny ny mpamorona anay.
F3: Inona ny ora fanateranao?
A3: santionany amin'ny ankapobeny 3-7 andro aorian'ny fandoavam-bola ， Ho an'ny filaminana namboarina, miankina amin'ny vokatra sy habetsany izany.
F4: Afaka mifangaro amin'ny endrika hafa ve aho?
A4: Azo antoka fa azo atao!
F5: Inona ny politikanao santionany?
A5: Ho an'ny santionany namboarina dia handoa sarany santionany izahay fa hamerina azy io rehefa mibaiko mihoatra ny 100 set
F6: Afaka mahazo vidiny ambany ve aho raha manafatra habetsahana be?
A6: Eny, ny vidiny mora vidy miaraka amina baiko betsaka kokoa.
F7: Ahoana no ahafahanao manome antoka ny kalitaon'ny famokarana?
A7: Nanamarina fatratra izahay talohan'ny nandefasana azy, hamokatra indray maimaim-poana raha olana amin'ny kalitao avy aty aminay izany
F8: Azoko atao ve ny mamolavola ny zava-drehetra eto?
A8: Eny tokoa; torohevitra aminay amin-katsaram-panahy fotsiny izahay ny fangatahanao manokana, ho vitantsika ny asa.
Previous: T-Shirt boribory lava lava vita amin'ny tanety lava tanana PY-NC003
Manaraka: T-Shirt fohy an'ny olona lava-boribory T-Shirt PY-ND005
Palitao vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo palitao PY -...
Landihazo sy rongony Retro V-vozon'ny lava tanana T ...
T-Shirt Lehilahy lava tanana amam-panao PY-NC002
Trends lamaody Zip Hoodies Men Jacket PY-MJ005
T-Shirt fohy an'ny olona Hip-Hop T-Shirt PY-ND002